रेशम चौधरी सपथ : सिंहदरबार आएर सपथ लिए, सांसदको लोगो बोकेर न्याय वा अन्यायको फैशला माग्दै कारागार गए – Mission Khabar
रेशम चौधरी सपथ : सिंहदरबार आएर सपथ लिए, सांसदको लोगो बोकेर न्याय वा अन्यायको फैशला माग्दै कारागार गए
मिसन खबर १९ पुष २०७५, बिहीबार १५:५२
काठमाडौँ – कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसद रेशम चौधरी अहिले डिल्लिबजार कारागारमा छन् । निर्वाचनको एक बर्षपछि कारागारबाट सिंहदरबार आएर उनले सांसद पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए । अनि उही स्थानमा मलिन हुँदै फर्किएर गए ।
सांसदको लोगो लिएपछि उनले भावुक हुँदै भनेका थिए– अब फेरी कारागारमै जानुपर्ने ? न्यायको भीख माग्दीन म प्रमाण पुगे दोषी करार गर्नु नभए छिटो निर्दोष भएको फैशला होस् । उनले यो पनि भने– हाम्रो कानुनले एक बर्षभन्दा बढी पूर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ, म लागयतका १७ जना साथीहरुले साँढे तीन बर्ष अनाहकमा किन कारागार बस्नुपर्ने ? यसमा सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुखको कार्यकक्षमा चौधरीले सपथ लिदा राजपाका सांसदहरुको उपस्थिति थियो । उनीहरु भन्दैथिए–निर्दोषलाई थुन्ने होइन्, अब मुद्धा फिर्ता लिएर न्याय दिनुपर्छ । सपथलाई राजपा सहित सरकार र सत्तारुढ दलले जायज भन्दैगर्दा नेपाली कांग्रेसले भने कानुनी राज्यको उपहास भनेको छ । कतिपय कानुनबिद्ले त न्यायालयमाथी सरकारले हस्तक्षप सुरु गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् । कैलालीस्थित टीकापुर घटना बिभत्स थियो, यसका अभियुक्त कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ यसमा सबै सहमत नै छन् । तर न्यायमा गरिने बिलम्भ पनि एक किसिमको अन्याय हो ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डमा मारिएका सात जना सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्याका मुख्य दोषी चौधरी हुन वा अरु कोही ? राज्यले छिट्टै यो बिवादको किनारा लगाउनुपर्छ ।